Ny tsara indrindra ny famenoana milina fananana - TopFillers
Afaka mamono milina
Home / Famonoana machinery / Afaka mamono milina
Afaka mamono milina, Famonoana machinery
Product Description Ny mpiasan'ny hazo dia afaka manamboatra milina / milina fanariam-pako. Ny famenoana masinina dia mifototra amin'ny tahirin-tsakafo lehibe sy mena midadasika, zavamaniry zava-pisotro misy ny toe-javatra tena izy, ny famolavolana sy ny famolavolana ny famolavolana vaovao, ny fandefasana tombo-kase , famenoana ny vokatra mitovy amin'izany. Ireo bozaka mifampikasokasoka amin'ny alàlan'ny pneumatic eo ambany, amin'ny fampiasana teknika toy ny famenoana famonoana, ny famokarana ny Frequency Control, mihoatra ny 95% amin'ny fitaovana ivelany vita amin'ny rindrina vita amin'ny rindrina, no manome antoka ny fisehon'ny milina sy ny fahadiovana. Mba hanatsarana ny haben'ny tobim-pidirana, araka ny fangatahan'ny mpanjifa ny dipoavatra, amin'ny ordinatera ...
Alimina afaka manamboatra milina fanasam-pisotroana angovo
Product Description Ny alimina dia afaka mameno milina fanodinana angovo / alikaola matetika amin'ny milina fantsona hafa, milina fanaovana diplaoma ho tsipika mahitsy. Ny tsipika famokarana dia mety amin'ny famokarana karazan-drongona karbona rehetra ao anaty aluminium 2- Ny ambony indrindra, toy ny cola, ny rano mafana, ny dite ny gilasy, sns. Izy io dia milina tsara indrindra ho an'ny orinasan'ny trondro bitika sy maitso. 1. Ity milina fitrandrahana ity dia ampiasaina amin'ny famenoana ny zava-pisotro karbônina ao anaty boaty, toy ny labiera, cola, drinks energia sy ny rano soda.Aluminium Can Filling Machine 2. Ity zava-pisotro misy alikaola ity dia azo ampiasaina ho an'ny hafa.
Fitaovana mahaleotena vy Fanafana machine
Product Introduction Ny mpamatsy NP-VF automatique vy dia afaka manamboatra milina matevina dia tena mameno filler, indrindra ho an'ny ranon-dipoavatra matevina amin'ny dity avo, toy ny rano, menaka, loto, crème, jam, sauce, tantely, ketchup ary toy izany. Ny ankamaroany dia ampiasaina amin'ny sehatry ny simika, ny sakafo sy ny indostria pharmaceutique. Ny ampahany dia mitovitovy amin'ny milina fiara CNC izay manana vy mahazatra avo lenta avo lenta, ny vokatra fototra rehetra dia entina avy any Japan, Alemana, Italia ary Amerika. Ny automatique feno, voafehy amin'ny PLC, miasa amin'ny alàlan'ny lam-baiko, mora miasa ary tsy mila ilàna azy. Ny mpamatsy vy automatique afaka mameno ny milina dia vita amin'ny ...
Vidiny Auto Spray Afaka Mameno Machin
Main Features 1, 304 Ny fanorenana tsy misy fefiloha ary ny ampahany amin'ny fifandraisana amin'ny rano dia ny stainless steel 316L. 2, fitaovan'ny pneumatic sy vokatra elektrika ho an'ny vokatra marika malaza. 3, PLC ary ny fanaraha-maso ny mombamomba ny solo, ny fametrahana mari-pamantarana mety. 4, Servo motera Driven, iray fiara mpitondra fiarakodia iray dia mandehandeha lavaka, haingam-pandeha ambony ary marina. 5, Volan'ny fameno, ao anatin'ny 0.2 ho an'ny 1000ML. 6, Tsy misy tavoahangy, tsy misy fofona, fampitandremana ho an'ny diso. 7, Ny fanakanana ny fako dia ny dipoavatra, ny sehatra, ary ny fiara manala ny gripa. 8, mora azo, tsy mila fitaovana manokana. 9, fanatobiana fanatobiana amin'ny famenoana ny fametahana vokatra manimba.
Aluminium automatique afaka manamboatra milina fisotro
Product Introduction NP-VF aluminium automatique dia afaka mameno milina masira ho an'ny zava-pisotro dia tena mameno filler, indrindra ho an'ny rano avy amin'ny dipoavatra matevina mankany amin'ny dity avo, toy ny rano, menaka, loto, creme, jam, sauce, tantely, ketchup ary toy izany. Ny ankamaroany dia ampiasaina amin'ny sehatry ny simika, ny sakafo sy ny indostria pharmaceutique. Ny ampahany dia mitovitovy amin'ny milina fiara CNC izay manana vy mahazatra avo lenta avo lenta, ny vokatra fototra rehetra dia entina avy any Japan, Alemana, Italia ary Amerika. Ny automatique feno, voafehy amin'ny PLC, miasa amin'ny alàlan'ny lam-baiko, mora miasa ary tsy mila ilàna azy. Ny alim-bary alaina dia afaka manamboatra milina amin'ny zava-pisotro misy alikaola ...
Tranom-bokatra Lungan mameno ny milina
Fametahana labiera fanasan-drà
Sarimihetsika mahavariana ao China ho an'ny kalitao ambony
Fanondrahana milina fanariana fanondrahana Shampoo automatique